talwinsuccess-hobbyit အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ......: April 2012
www.myanmar IT pro
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အရာက သူငယ်ချင်းတို့အတွက်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ရင်ကျေနပ်ပါပြီ။
လူငယ်များအတွက် chatting များနဲ့အချိန်မကုန်စေချင်ဘဲ၊ internet ကိုကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
copy ကူးပြီး notepad နဲ့ save လုပ်ပြီး သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
Posted by talwinsuccess at 8:37 PM2comments
English စာအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များ
ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းက ... ကျွန်တော်တို့က Internet Useability နဲ့ ပတ်သက်ပြီးရေးတော့ စာဖတ်သူ တွေဘက်က အင်တာနက် သုံးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ အင်တာနက် စသုံးသုံးချင်းမှာ ယောင်လည် လည်နဲ့ ဘယ် Websites တွေ၊ ဘာတွေကြည့်ရမှာလဲလို့ ပြန်မေးလာ ပါတယ်။ တကယ်တော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကြည့်လို့ မရတဲ့ Topic ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါ။ အပ်ကစ ဂေါ်ဇီလာအဆုံး၊ Related Information တွေ အားလုံးကို online ပေါ်မှာ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ စာရေးသူအနေနဲ့ ဒီလကစပြီး အင်တာနက်ပေါ်က အကောင်းဆုံး Top Ten Websites တွေကို သူ့အမျိုး အစား Categories အလိုက် လစဉ်ဖော်ပြသွားပါမယ်။ ဒီလ တင်ပြချင်တာကတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး Websites ၁၀ ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်တွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တွေ၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Courses တွေ မျိုးစုံရှိ ပါတယ်။ အချိန်၊ ငွေကြေး တတ်နိုင်ရင် အလွယ်တကူ တက်ရောက် သင်ကြားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်း ပေါ်က Learning English Websites တွေကတော့ အချိန် ကုန်ငွေကုန် သက်သာပြီး နောက်ဆုံးပေါ် up-to-date English Language Knowledge တွေကို အလွယ်တကူ လေ့လာလို့ရတာမို့ ယခုလိုတင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Websites တွေရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Ranking) ကို ယူကေနိုင်ငံအခြေစိုက် လွတ်လပ်တဲ့ အွန်လိုင်း လေ့လာသူများအသင်းက သတ်မှတ်ထားခြင်းပါ။ ကဲ ...ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရေး Websites တွေဆီကို အလည်သွားကြရ အောင် ...။ www.nonstopenglish.com ဒီ website ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နံပါတ်(၁) website ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ website မှာ အသုံးပြုသူ User တွေ အနေနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ English Grammer and Vocabulary Skill တွေကို Interactive Tests တွေနဲ့ စစ်ဆေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Register လုပ်ပြီး User log-in နဲ့ ၀င် မယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ဆီက အခမဲ့ Email Test တွေ ရယူ ဖြေဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ရမှတ်ကိုလည်း ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ ရပါ တယ်။ ဒီ websites က သူ့ရဲ့ Tests တွေကို အပတ်စဉ် Update လုပ်ပေးပါတယ်။ www.englishclub.com သူကတော့ ဒုတိယအကောင်းဆုံး Learning English websites ပါ။ ဒီ website မှာတော့ လူငယ်ကြိုက် လွတ်လပ်စွာ English သင်ကြားတဲ့ပုံစံကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကဗျာလေးတွေ၊ စာလေးတွေကို website ပေါ်မှာပြန်ပြီး Upload လုပ်လို့ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် (Comments)တွေကိုလည်း website ပေါ်မှာ ရေးလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းပြသနာတွေကိုလည်း အခမဲ့ email နဲ့ ဖြေကြားပေးပါသေးတယ်။ www.freeenglish.com ဒီ website မှာတော့ အခမဲ့သင်ခန်းစာတွေ၊ English နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ebook တွေကို download ရယူ နိုင်ပါတယ်။ www.rong-chang.com ဒီ website ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို second language အဖြစ် လေ့လာတဲ့ သူတွေအတွက် အထူး လွှင့်တင်ထားတဲ့ website ပါ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော် တို့လို english ဘာသာ mother language မဟုတ်တဲ့ လေ့လာသူများအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း မျိုးစုံထဲက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ရွေးချယ်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ www.englishathome.com ဒီ website မှာတော့ Grammer, vocabulary, verbs and speaking games တွေနဲ့ english newsletter (သတင်းလွှာ)တွေကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။ www.nylanguageexchnage.com ဒီ website ကတော့ နာမည်အတိုင်း မတူညီတဲ့ ဘာသာစကား နှစ်ခုကို မတူညီတဲ့ လူနှစ်ယောက် သင်ယူ တဲ့ နေရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ဥပမာ - ပြင်သစ်စကား သင်နေတဲ့ english speaker တစ်ယောက်နဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားသင်နေတဲ့ french speaker တစ်ယောက် အပြန် အလှန် သင်ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ www.roseofyork.co.uk ဒီ website ကိုတော့ the rose of york english college က လွှင့်တင်ထားတာပါ။ ဒီ site မှာ user တွေ အနေနဲ့ general english, business english, academic english, english speaking စတာတွေကို အခမဲ့သင်ကြား လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။ www.expertenglish.com ဒီ site မှာတော့ user တွေကိုယ်တိုင် ပါဝင် (participate) နိုင်တဲ့ program တွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ - one stop english perfection program မျိုးတွေနဲ့ပါ။ www.worldenglish.com ဒီ website ကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ english ဘာသာလေ့လာသူတွေအနေနဲ့ Highest quality english language resources တွေကို ရရှိကြစေနိုင်ဖို့ လွှင့် တင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က မျက်စိမှုန်သူများနှင့် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူတွေ အတွက်ပါ လေ့လာနိုင်ဖုိ့ font size အကြီး အသေးကို အဆင့် ၄ ဆင့်အထိ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက် ပေါ်က စာလုံးသေးသေးလေးတွေကို ဖတ်ရတာ စိတ် ပျက်နေသူတွေအတွက် များစွာသင့်လျော်ပါတယ်။ www.learnenglish.org.uk ဒီ we bsite မှာတော့ english ဘာသာလေ့လာ ရာမှာ အထောက်အကူပြု quotes တွေ၊ films တွေ၊ music file တွေကို အခမဲ့ download ရယူနိုင်ကြပါတယ်။
Posted by talwinsuccess at 10:03 AM0comments
3. Gtalk က offline chat (သူခိုးချက်)တွေကို ဖမ်းပုံဖမ်းနည်း...
Posted by talwinsuccess at 10:15 PM0comments
တိုးတက်လာတဲ့ အင်တာနက်ခေတ်မှာ ဆိုရှယ်ဆိုဒ်တွေ အများကြီးပေါ်ပေါက်လာသလို ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီး ထား တဲ့ ဘလော့ ဆိုဒ်များလဲ အများအပြားထွက်လာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ စာဖတ်တာ ၀ါသနာ ပါသူများကတော့ ထိုဆိုဒ်တွေမှာ လိုက်ပြီး ဖတ်ရှုကြသလို ကိုယ်တိုင်ရေးသားတတ်သူတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ဖန်တီးထားမှုများကို ကိုယ်ပိုင် ဆိုဒ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး ဖန်တီးလိုသူများက ပိုက်ဆံပေး စရာမလိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင် Domain လေးတွေ ယူပြီးဖန်တီး တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အ၇င်က www.blogspot.com ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေ အတော်များများ ပုံမှန် proxy နဲ့ဝင်ကြည့် လို့မရတတ် ပါဘူး။ ကျော်ခွပြီး ၀င်တတ် မှသာ တစ်ခါတစ်ရံဝင်လို့ရတာပါ။ ဒါကြောင့် များသောအားဖြင့် မိမိဆိုဒ် ကို နေရာစုံ နိုင်ငံစုံက ဖန်တီးလို့ရအောင် co.cc domain နဲ့ ပြောင်းပြီးဖန်တီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ ဘလော့တွေကို domain ပြောင်းချင်သူများအတွက် (co.cc သို့) ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပိုစ့်လေးကို တင်ပြ တာပါ။ ခုချိန်မှာတော့ ဘလော့တော်တော် များများကို ကြည့်လို့ ၇နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်---- ဒီအကြောင်းလေး ကို သိပြီးသား သူငယ်ချင်း တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ မသိသေးတဲ့သူတွေ ရှိခဲ့ရင် အထောက် အကူဖြစ်အောင် တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါ တယ် --ခင်ဗျာ။။။
အောက်မှာ ပြုလုပ်ပုံလေး အဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်---
(၁). http://www.co.cc/ မှာ Account တစ်ခု Register လုပ်ပါ။
(၂). မိမိ Account ကို SignIn ၀င်ပါ... 'Domain Setting' ကို ရွေးပါ... မိမိ နှစ်သက်ရာနာမည်နဲ့ 'Domain' နာမည် တစ်ခု Create လုပ်ပါ... မိမိနှစ်သက်ရာ နာမည်တစ်ခု (blogspot က နာမည်အတိုင်းပေးချင်လဲ ရပါတယ်)။ ဒီအကောင့်က blogspot.com ကနေပြောင်းဖို့ ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာ နာမည်နဲ့ ဘလော့ တစ်ခု ဖန်တီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ .. ထို့နောက် 'Setup'ကို ရွေးပါ...
(၃). Option သုံးခု ရှိတဲ့ထဲက ဒုတိယ Option ဖြစ်တဲ့ 'Zone Record' ကို ရွေးရပါမယ်...
(၄). 'Host' မှာ 'www.yourdomainname.co.cc' ကို ထည့်ပါ... (Domain Nameမှာ 'www' ပါရပါမယ်...)
'TTL'မှာ '1D'ကို ရွေးပါ... 'Type'မှာ 'CNAME'ကို ရွေးပါ... 'Value'မှာ 'ghs.google.com'ကို ထည့်ပါ...
(၅). 'Setup' buttonကို Clickလုပ်ပါ... ဒါဆိုရင် မိမိ Blog အတွက် Domain တစ်ခုရပါပြီ...
ဒီအဆင့် ပြီးတဲ့ အခါ မှာတော့ မိမိ domain ကိုပြောင်းဖို့အတွက် ၄၈ နာရီ (၂ ရက်) စောင့်ဖို့လိုပါတယ်။ ၂ ရက်ကြာမှသာ အောက်က အဆင့်များကို ဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၆). Blogger Accout ကို Login ၀င်ပါ... 'Setting' ကို သွားပါ... 'Publishing' Tab ကို ရွေးပါ...
(၇). 'Custom Domain'ကို ရွေးပါ... 'Switch to advanced settings' ကို ရွေးပါ...
(၈). 'Your Domain' မှာ 'www.yourdomainname.co.cc' ကို ထည့်ပါ... Save လုပ်ပါ...Blog ကို CustomDomain CO.CC နဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ...
ဒီပိုစ့် လေးကို WYTU ဆိုဒ်မှ ပြန်လည် မျှဝေပေးထား တာဖြစ်ပါတယ်---- အဆင်ပြေပါစေ--ခင်ဗျာ။။။။။
Posted by talwinsuccess at 2:34 PM0comments